चीनमा नेपाली विद्यार्थीहरुको कमाल
२०७४ असार २१ बुधबार, पैचिङ। पछिल्लो समय चीन विश्व भरि विस्तृत रूपमा छाएको छ। चीनले हर एक क्षेत्रमा गर्दैआएको तीव्र विकास र प्रगतिको साक्षी बनेको छ आजको विश्व। तर यही चीनमा नेपाली विद्यार्थीहरुले कमाल गरी देखाएका छन्। अमेरिका र युरोपजस्ता देशबाट समेत गरी विश्वका डेढ सयभन्दा बढि देशका हजारौंहजार विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने चीनमा तीन नेपाली विद्यार्थीले शीर्षस्थ दशमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएका छन्। ... बाँकी अंश»
हरिशयनी एकादशी : अबका चारमहिना शुभ हुँदैनन् कार्य, यस्तो छ व्रतविधि
२०७४ असार २० मंगलबार, काठमाडौं । मंगलबार देश तथा विदेशका हिन्दूहरुले समेत ठूलो एकादशी तथा हरिशयनी एकादशी मनाएका छन् । यस एकादशीलाई हरि शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी र पद्म शयनी एकादशीको नामबाट समेत चिनिने गरेको छ । यो पर्व यस कारण मनाईने गरेको छ कि भगवान विष्णु राजा बलिको पाताल लोकमा यस दिनदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीको दिन शयन गर्न जाने भएकोले त्यसैको सम्झना स्वरुप यो पर्व मनाउने गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
वैदेशिक रोजगारी सुखदुःखको मिश्रण
२०७४ असार २० मंगलबार, दोहा कतार । नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सले धान्दै आएको छ । दैनिक जसो कामको खोजिमा देश छाडनेको संख्या बढदो छ । रेमिटेन्ससंगै पिडा पनि दैनिक जसो भित्री रहेको छ । रेमिटेन्स भित्र्याउन परदेश जाने नौजवानका पीडा पनि आफ्नै-आफ्नो छ । अर्बौको रेमिटेन्ससंगै प्रतिदिन ३ वटा कफिम पनि भित्र्याउने गर्छौ हामी, यो सत्य हो । पछिल्लो समय नेपालीहरूको राम्रो श्रम गन्तव्य बनेको छ कतार । कतारमा कामका लागि चुनौति र अवसर दुबै रहेको अर्थाउनेहरू कमि छैन । ... बाँकी अंश»
कालसर्पयोग र समाधान
२०७४ असार २० मंगलबार, आजकल भित्ता भित्तामा अनेक पोस्टरहरु छरपस्टै भेटिन्छन्। कालसर्प योग शान्ति मात्र यति रुपैयाँमा भनेर। कालसर्प योग रहेछ मेरो त म बर्बाद नै भएछु भन्नेहरु पनि धेरै भेटिन्छन् समाजमा। सामुहिक कालसर्प योगको पूजा गर्नु भन्दै भन्दै रेडियो पत्रपत्रिकामा आउने विज्ञापनको त झन् कुरै छोडौं। कालसर्प योगको यथार्थ रहस्य थाहा नहुनु झन ठुलो महाकालसर्पयोग भएको छ हामि सबैका लागि। ज्यौतिषका केहि नवीन ग्रन्थहरुमा यस योगबारे अनुसन्धान र अध्ययन देखिने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
साझा सवालमा प्रम: प्रश्नको शैली अलि मिलेन
२०७४ असार २० मंगलबार, "लि क्वान यु लाई सिङ्गापुर दिंदा ढुङ्गा दिइएको थियो, उनले हीरा बनाए, तपाईंलाई नेपाल तपाईंको हातमा दिंदाखेरि हीरा दिइएको थियो, तपाईंले ढुङ्गा बनाउनुभो" ... बाँकी अंश»
२०७४ असार १९ सोमबार, अनुत्तरित छन् अनेकौं ‘साझा–सवाल’हरु यहाँ। जवाफ खोज्ने फुर्सद छैन हामीलाई। बोल्न जानेका छौं हामीले र ‘बकबक’ गर्दछौं जहींतहीं। हामीले कहिल्यै बोलेनौं – जाबो पोलियो थोपा नपाएर दह्रो उभिन नसकेका खुट्टाहरुको पीडामाथि । हामीले कुनै दिन हतार गरेनौं – ... बाँकी अंश»
ज्योतिषशास्त्रमा कसरी गरिन्छ कुण्डली हेरेर भाग्य फैसला ?
२०७४ असार १७ शनिबार, काठमाडौं । वेद हिन्दू संस्कृतिको एउटा महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो । संसारको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेददेखि संस्कृत साहित्यका अनेकानेक अंगहरुमा बेदको प्रभाव देख्न सकिन्छ । संस्कृतमा वेदोखिलो धर्ममूलम् भन्ने उक्तिले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । अर्थात् वेद नै सबै धर्मको उद्गमस्थल भन्ने उक्ति सर्वत्र सबैले मानिआएकै कुरा हो । ... बाँकी अंश»
२०७४ असार १४ बुधबार, समय, परिस्थिति र विवसता यी तिनै कारणले आफ्नो जन्म घर आमा बाबा, प्रिय साथी भाइ अनि सुखदु:खमा साथ दिने प्यारो बस्तीबाट सपनाको संसार सजाउनको लागि सुनौलो भविष्यको खोजीमा निस्कने मान्छे नै प्रदेशी हो । प्रदेशी रहरले भन्दापनि बाध्यता, जिम्वेवारी दुबै पूरा गर्ने सपनाको मालिक पनि हो। ... बाँकी अंश»
नागरिक नै वास्तविक नायक–नायिका
२०७४ असार १४ बुधबार, आँधीले रोक्न सक्दैन... बाढीले छेक्न सक्दैन... खुब बजे एकताका उदित र दीपा । संयोगले यही मर्ममा सिंगो देश उभियो यतिखेर । युगदेखि युगसम्म प्रभाव पार्ने एउटा ऐतिहासिक तिथि बन्यो– असार १४ । ... बाँकी अंश»
भारतलाई हतियार बनाउँदै अमेरिका !
२०७४ असार १३ मंगलबार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन् । अहिले मोदीले गरेको भ्रमण यसअघिको जस्तो सामान्य किसमको भने छैन । यो भ्रमणले आगामी दिनमा अमेरिका र भारतको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ र भारतको आगामी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्छ । भारत भ्रमणलाई अमेरिकाले पनि महत्व दिएको छ । यसले पनि यो भ्रमण केही विशेष हुने देखिएको हो । ... बाँकी अंश»
झापा–गर्मी छल्न राजधानी पसेका ‘खड्ग–श्रीमान्’ले आचारसंहितालाई ‘अचार’बनाएपछि
२०७४ असार १३ मंगलबार, एक ‘गाछी–छाप’ पार्टीका शुभचिन्तक भेटिए । उनले भने – ‘असार १४ गते त ठूलो पानी पर्छ भन्ने सुनेको छु । ठूलो पानी परेपछि सौखिन–नेता एवं कार्यकर्ताहरु भोट हाल्न नजालान् नि फेरि ।’ ... बाँकी अंश»
रमजान बनाम वेद
२०७४ असार १३ मंगलबार, काठमाडौं । संस्कृतं संस्कृतेर्मूलम् । संस्कृत सबै संस्कृतिको उद्गमस्थल हो वेदोखिलो धर्ममूलम् । ... बाँकी अंश»
झुक्न खोजेकै हो त साउदी ? कतारलाई पठायो १३ बुँदे प्रस्ताव
२०७४ असार १२ सोमबार, काठमाडौं । साउदी अरेबिया सबै अरब मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभुत्व राख्न चाहन्छ । यो बानी साउदी अरेबियाले लामो समयदेखि जोगाउँदै आएको छ । यस्तोमा कुनै पनि मध्यपूर्वका मुलुकहरुले उसँग चुनौती लिन खोजेको खण्डमा साउदीको जस्तोसुकै प्रतिबन्ध वा नीतिको सामना गर्न तयार पुनुपर्ने हुन्छ । यही नियती अहिले कतारले भोगिरहेको छ । कतारले साउदी अरेबियाको इच्छाविपरीत सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय गर्नुले कतारले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको हो । ... बाँकी अंश»
विरामीको सेवाबाट जनताको सेवामा जाँदै डा कनोडिया
२०७४ असार ११ आइतबार, नेपालगञ्ज। डा. सुरेश कुमार कनोडियाको नाम धेरैलाई कण्ठ छ तर कयौंको गुनासो पनि छ। सहजै भेटवार्ता गर्न पाइएको छैन । त्यो अस्वभाविक पनि होइन, किनकी उनी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको सञ्चालक अनी प्रवन्ध निर्देशक हुन् । धेरै थरिको व्यस्तता र अहं जिम्मेवारी पनि छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ असार ११ आइतबार, काठमाडौं । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा ६ हजार ५१ जनप्रतिनिधि अर्थात् ४५ दशमलव १५ प्रतिशत सिट जितेर पहिलो राजनीतिक दल बनेको नेकपा (एमाले) असार १४ गते हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहजै पहिलो दल हुँदैछ । एमालेको परम्परागत पकड क्षेत्र र शहरी इलाका दुबैका कारण पहिलो चरणमा भन्दा भारी अन्तरले एमालेले अग्रता कायम गर्दैछ । दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेलाई कमजोर ठानेर त्यहाँबाट पछाडि पार्न सकिन्छ कि भन्ने हिसावमा रहेको कांग्रेसले त्यो परिस्थिति पनि नदेखेपछि राजपालाई अघि सारेर निर्वाचन स्थगित गरेका कारण बाँकी क्षेत्रमा एमालेलाई झन् सजिलो भएको छ । ... बाँकी अंश»
वैदेशिक रोजगारी बाध्यता कि रहर !
२०७४ असार ८ बिहिबार, कतार । वैदेशिक रोजगारी सुन्दा जति सरल छ विदेश जाने, कमाउने र ल्याउने तर त्यही कुरा गर्न सयौं गुणा कठिन छ । ... बाँकी अंश»